Sabboonummaan Oromoo akkamitti hubatama? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSabboonummaan Oromoo akkamitti hubatama?
Berhanu Hundee, Caamsaa 26, 2019
Dr. Abiy Ahmad seenaa Minilik malee seenaa Oromoo fi saboonummaa Oromoo hin beekus, hin fudhatus. Habashaa caalaa saboonummaa balleessuf hojii irraa jira.
1) “… carraa biyya bulchuu yeroo duraatiif namni Oromoo ta’ee, ani Oromoo dha jedhee sadarkaa sanatti oldhufee, Sabboonummaa Oromoo amma tokko naannoo sanatti calaqqisiise isuma.” kan jedhu haa laallu:
2) “Seenaa kana dura hin turre sanaa fi seenaa har’aa kana walitti fiduudhaaf namoota kan akka nagatiiv naashinaalizimiin ofirraa dhiibu sanatti ofirraa dhiibatee achi taa’uu hin danda’u. Accommodate godhuu danda’uu qaba; compromise godhuu danda’uu qaba…” kan jedhu yoo laalle immoo,